म हिरो पनि हुँ, जोकर पनि हुँः हरिवंश आचार्य | Kendrabindu Nepal Online News
१९ बैशाख २०७६, बिहीबार १२:५९
२०७६ को सुरुवातमा नै कमेडी चलचित्र ‘दाल भात तरकारी’ प्रदर्शनमा आउँदैछ । महसञ्चारको प्रस्तुति चलचित्र ‘दाल भात तरकारी’ यहि शुक्रबार अर्थात बैशाख २० गतेदेखि देशभर प्रदर्शनमा आउँदैछ । उक्त चलचित्रमा हरिवंश आचार्य र निरुता सिंहले एउटै स्क्रिन शेयर गरेका छन् ।
लामो समयको अन्तरालपछि निरुताले नेपाली रजतपटमा कमब्याक गरेकी हुन् । किरण केसीले निर्माण गरेको यस चलचित्रलाई उनको छोरा सुदन केसीले निर्देशन गरेका छन् । कमेडी जनारामा निर्माण गरिएको चलचित्र ‘दाल भात तरकारी’ मा हरिवंश आचार्यको लेखन रहेको छ । चलचित्रकै विषयमा हरिवंश आचार्यसँग गरिएको कुराकानीः
१) मह जोडीले निर्माण गर्ने टेलिसिरिय तथा चलचित्रहरुमा हाँसोसँगै गम्भीर सन्देश दिन खोजिएको हुन्छ । दाल भात तरकारीको सन्दर्भमा त्यस्तो के छ ?
दाल भात तरकारी छुटै फरक प्रसंगको चलचित्र हो । समाजमा हामीले भोगी रहेका कुराहरु, हामी नेपाली कुन मनोदशामा अघि बढिरहेका छौं भन्ने विषयलाई हामीले कथा बनाएका छौं । साथै चलचित्रमा मनोरञ्जनलाई सबै भन्दा ठुलो प्राथमिकता दिएका छौं ।
२) चलचित्र ‘सत्रुगते’ प्रदर्शन भएको दुई वर्षपछि ‘दाल भात तरकारी’ लिएर आउनु भएको छ, चलचित्र क्षेत्रको बेतिथीलाई कसरी बुझ्नु भएको छ ?
हाम्रो नेपाली चलचित्र संस्कृतिमा मेरो मात्र चलचित्र चल्दिए हुन्थ्यो, मेरो मात्र चलचित्र हेर्दिए हुन्थ्यो भन्ने ‘वानम्यान’ सोचाई हुँदो रहेछ सबैमा । त्यो सोचाइबाट हामी माथी उठनुपर्छ । हामीले एक्लैले मात्र चलचित्र बनाएर एक्लैको मात्र चलचित्र चल्यो भने चलचित्रले उद्योगको रुप ग्रहण गर्न सक्दैन् । मेरो मात्र चलचित्र चलोस होइन् कि सबैको चलचित्र चलोस । सबैको चलचित्रले सामान्य मापदण्ड पुरा गर्न सकोस भन्ने सोचाइ हामीले राख्नु पर्दछ ।
३) नायक हुने उमेरमा क्यारेक्टर भएर पर्दामा दर्शकलाई हसाँउनु भयो, अहिले चलचित्रमा नायिकासँग नाचिरहेको दृश्य देखिन्छ, युवा अवस्थामा मैले यी चिजहरु मिस गरे भन्ने लाग्छ या लाग्दैन् ?
त्यो बेला यो चिज पाएको भए, आज म यो मान्छे नै हुन सक्दैन् थिए । त्यो बेला मैले हाँस्यव्यङग्यको जुन एउटा क्रेज भेटाए, त्यो स्थापना भएकोले नै आज म यो ठाँउमा उभिन पाएको छु ।
त्यो समयमा हिरो हुने मान्छे धेरै हुनुहुन्थ्यो, सायद म पनि हिरो जस्तै हुन्थे होला । म हिरो मात्र हुन्थे होला तर म अहिले चरित्र अभिनेता हुन पाएको छु । चरित्र अभिनेता भनेको यस्तो चिज हो हिरो पनि हुन पाइन्छ, जोकर नि हुन पाइन्छ जे पनि हुन पाइन्छ । त्यसैले म आफु हिरो हुन नपाएर होइन कि चरित्र अभिनेता हुन पाउँदा गर्व लाग्छ ।
४) रंगमञ्चमा जुन मह जोडीको एउटा क्रेज छ, त्यो समयमा जति क्रेज थियो, अहिले त्यो सुन्य भयो जस्तो लाग्दैन् ?
त्यो उपस्थिति सुन्य भएको छ, हाम्रो उपस्थिति मात्र सुन्य भएको छ्रैन् कि नेपाली टेलिभिजनहरुको उपस्थिति नै सुन्य भएको छ । किनभने त्यो बेलामा हामीले जुन टेलिसिरियलहरु बनायौं त्यो बेला विकल्पहरु थिएन् । भारतमा एउटा दुईवटा च्यानलहरु थियो । हाम्रो नेपालमा पनि एउटा दुईटा च्यानल मात्र थिए ।
अहिले हामी जुन ठाँउ जाँउ मानिसहरु नेपाली भन्दा पनि विदेशी चलचित्रमा टोलाएर बसिराख्नु भएको हुन्छ । यो चिजमा हामीले मात्र पहल गरेर सक्दैनौं । राज्यले पहल गर्नुपर्छ । भारतले त आफ्नो चलचित्र देखाएर आफ्नो सांस्कृतिक प्रभाव प्रत्यक्ष रुपमा पारेको छ । मिडियामा लगानी गरेर प्रत्यक्ष केही फाइदा छैन्, भन्ने सरकारको सोचाइ छ ।
hari bansha acharya, किरण केसी, दाल भात तरकारी, निरुता सिंह, सुदन केसी, हरिवंश आचार्य
Prevनेपालमा पहिलो पटक मानिसमा देखियो बर्ड फ्लू, एक युवकको मृत्यु
पर्याप्त विजुली भएरपनि ललितपुरमा लोडसेडिङ गर्नुपर्ने बाध्यताNext
नयाँ बसपार्कमा धुम मच्चाउँदै ‘दाल भात तरकारी’ को टिम (भिडियोमा)